သင့္ရဲ႕စိတ္ကူးအိပ္မက္ေတြကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔အတြက္သင့္ရဲ႕စိတ္ကူးအိပ္မက္ေတြကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔အတြက္သင့္ရဲ႕စိတ္ကူးအိပ္မက္ေတြကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔အတြက္သင့္ရဲ႕စိတ္ကူးအိပ္မက္ေတြကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔အတြက္သင့္ရဲ႕စိတ္ကူးအိပ္မက္ေတြကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔အတြက္သင့္ရဲ႕စိတ္ကူးအိပ္မက္ေတြကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔အတြက္သင့္ရဲ႕စိတ္ကူးအိပ္မက္ေတြကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အကြှနျုပျတို့သညျဤပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်ဖန်တီးအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏အတွင်းပိုင်းကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရစေမည်သောဤဆိုက်အပေါ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူဂိမ်းတွေနဲ့လာ။ အချို့သောဂိမ်းများသည်လက်တွေ့ကျသောကလေးများပါ ၀ င်သည်။ အခြားသူများကဤလောကထဲကနေသောပူပြင်းခြင်းနှင့်တပါးသားငယ်များအမျိုးမျိုးတို့ကိုနှင့်အတူလာမယ့်နေကြသည်။, ကျနော်တို့တောင်မှသင်လိုချင်သောမိန်းမမဆိုကြင်နာသို့သင့်ရဲ့ဇာတ်ကောင်အသွင်ပြောင်းစေမည်ကိုတိုးမြှင့်စိတ်ကြိုက်နှင့်အတူဂိမ်းရှိသည်။ သင်သည်သူတို့၏ရင်သားအရွယ်အစားပြောင်းလဲနိုင်သည်;သူတို့ရဲ့တိုက်ပုံကိုကြည့်လမ်းကိုပြောင်းလဲပင်အချို့ပိုမိုအဆင့်မြင့်ဂိမ်းထဲမှာသူတို့ရဲ့လူမျိုးစုကိုရွေးချယ်ပါ။ ဒီဂိမ်းထဲမှာဂရပ်ဖစ်နှင့်ရူပဗေဒအချက်အပေါ်လည်းဖြစ်ကြသည်။
တဖန်သင်တို့အသုံးပြုစေခြင်းငှါမဆိုကိရိယာပေါ်တွင်ဤအံ့သြဖွယ်ညစ်ညမ်းအတွေ့အကြုံများကိုခံစားရလိမ့်မယ်။ ကြန္ျပဴတာနဲ႔ မိုဘိုင္းဖုန္းေတြမွာကစားႏိုင္တဲ့ဂိမ္းေတြရွိသလို၊ထိေတြ႕မ်က္ႏွာျပင္ေပၚကဂိမ္းနဲ႔ပတ္သက္တဲ့ျပႆနာေတြမရွိေစဖို႔ အန္းဒ႐ြိဳက္နဲ႔ အိုင္အိုဒင္းစက္ကိရိယာႏွစ္ခုလံုးကိုလည္းစမ္းသပ္ထားပါတယ္။ ငါတို့သည်သင်တို့အစဉ်အဆက်တစ်ပျော်စရာအချိန်များအတွက်လိုအပ်အံ့သောငှါအရာအားလုံးရှိသည်။ ငါတို့ရှိသမျှသည်သင့်ရဲ့ယုတ်လိုအပ်ချက်များအတွက်အမာခံလိင်ဂိမ်းရှိသည်နှင့်ကျွန်တော်အခမဲ့အဘို့ထိုသူတို့အားလုံးဆက်ကပ်။ ကြောင်း၏ထိပ်တွင်,ငါတို့သည်သင်တို့အစဉ်အဆက်မဆိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုပြောပြခြင်းမရှိဘဲအခြားကစားသမားတွေနဲ့အပြန်အလှန်ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့ပျော်မွေ့ပါစေလိမ့်မည်ဟုအသိုင်းအဝိုင်းအင်္ဂါရပ်များရှိသည်။, ဒီဝဘ်ပေါ်တွင်အဆုံးစွန်ညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားပလက်ဖောင်းဖြစ်စေခြင်းငှါ,. ကျနော်တို့ဆိုက်ပိုကောင်းစနစ်တကျနှင့်ငါတို့ထက်ပိုကောင်းဂိမ်းတွေနဲ့ကြည့်ဖို့သေးဖြစ်ကြသည်။ ပြီးတော့ငါတို့ပုံမှန်စုဆောင်းမှုအသစ်တွေကိုဂိမ်းအသစ်တွေနဲ့တင်ထားတယ်။
အမာခံလိင်ဂိမ်း၏ဤစုဆောင်းမှုနှင့်အတူ,သငျသညျအစဉျအမွဲကိုဖနျတီးဘို့နောက်တဖန်ဘာမျှမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော်တို့ပြီးသားဆိုက်ပေါ်တွင်ဂိမ်းရာပေါင်းများစွာရှိသည်နှင့်ငါတို့သည်အသစ်သောအကြောင်းအရာများကိုဆောင်ကြဉ်းရာမှာတင်နှုန်းသင်တို့သည်ငါတို့၏ဆိုက်အပေါ်အရာအားလုံးကစားပြီးအောင်ဘယ်တော့မှနိုင်အောင်အံ့သြဖွယ်ပါပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝက်ဘ်ပေါ်တွင်လူကြိုက်များသောညစ်ညမ်းအမျိုးအစားအားလုံးမှဂိမ်းများ၊သင်အမြဲပျော်မွေ့လိုသောအမျိုးအစားအားလုံးမှမဟုတ်ဘဲအခြားဆိုဒ်များမှရှောင်ရှားသောဂိမ်းများဖြစ်သည်။ ခေတ်ရေစီးကြောင်းအရညစ်ညမ်းလောကကနေသင့်ကိုမဖွယ်မရာလိင်ဂိမ်းတွေ၊တချို့သောဘတ်စကတ်ဘောတွေ၊အပြန်အလှန်လိင်ဂိမ်းတွေနဲ့ပင်တိုင်လိင်ဂိမ်းတွေကိုယူဆောင်လာပေးပါတယ်။, အဆိုပါညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားကမ္ဘာကနေ,ငါတို့သည်သင်တို့ကစားချင်အားလုံးရုပ်ပြောင်လိင်ဂိမ်းများ,အေးခဲကနေအဲလျဆာအဖြစ်သောသူငယ်နှင့်အတူ,လုံးဝသူလျှို၏သူငယ်နှင့်အတူ,ထိုရုပ်ပြောင်သို့မဟုတ်ကြယ်ပွင့်စစ်ပွဲများ၏ဂိမ်းထဲကနေကလေးများနှင့်အတူပင်. ငါတို့သည်လည်းမြေအောက်ညစ်ညမ်းကမ္ဘာကနေဂိမ်းများ,နဂါးလိင်ဂိမ်းများအပါအဝင်,အချို့သောမုဒိမ်းမှုအခန်းကဏ္ဍကစားစွန့်စားခြင်းနှင့်ပင်အချို့သောစိတ်ကိုထိန်းချုပ်မှုဂိမ်းများသို့မဟုတ်အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းဂိမ်းများရှိသည်။
ဤသူအပေါင်းတို့သည်ဂိမ်းကွဲပြားခြားနားသောဂိမ်းစတိုင်များ၌သင်တို့ဆီသို့လာမယ့်နေကြသည်။ ထိုသူအချို့တို့သည်ပိုပြီးတိုက်ရိုက်နှင့်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်၊ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်လိင် simulators။ တခ်ိဳ႕ကလိင္ကိစၥထက္ေက်ာ္လြန္သြားတဲ႔ စာလံုးေပါင္းအမွားေတြကိုအာရံုစိုက္ေနၾကတယ္။ ညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားနေစဉ်သင်အသက်ရှင်မယ်လို့စိတ်ခံစားမှုအသက်ရှင်နေထိုင်ချင်လျှင်,ထို့နောက်သင်တို့သည်ငါတို့၏ဆိုဒ်၏စာသားကိုအခြေခံပြီးဂိမ်းအဘို့အသွားသင့်ပါတယ်,သင်အတွင်းကနေအဲလစ်ဇဘက်ပုံပြင်များအသက်ရှင်နေထိုင်ရနှင့်မြေတပြင်လုံးစွန့်စားမှုအဆုံးသတ်ပုံကိုရှေးခယျြပါလိမ့်မယ်ဘယ်မှာရှိ.
သငျသညျစုံလင်သောညစ်ညမ်းအတွေ့အကြုံအတွက်လိုအပ်စေခြင်းငှါဘာမှဒီမှာဖြစ်ပါတယ်။ ငါတို့သည်သင်တို့ပျော်မွေ့ချင်အပေါငျးတို့သမျိုးနှင့်စိတ်ကူးယဉ်ရှိသည်,ဒါပေမယ့်ငါတို့သည်လည်းတစ်ဦးညစ်ညမ်းဂိမ်းကစားဆိုက်လိုအပ်သမျှသောအခြားဒြပ်စင်များနှင့်အတူလာကြ၏။ အဆိုပါအသိုင်းအဝိုင်းကိရိယာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပလက်ဖောင်းဖို့ကောင်းတဲ့အပြင်ဖြစ်ကြပြီးသူတို့တစ်တွေရိုးရှင်းတဲ့ဧည့်သည်အဖြစ်သင်တို့ဆီသို့လာဆိုတဲ့အချက်ကိုဒါအထူးဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်မှာဘေးကင်းလုံခြုံခံစားမိစေလိုသောမှတဆင့်နည်းလမ်းများစွာထဲကတစ်ခုဖြစ်တယ်။ သငျသညျဘေးကင်းလုံခြုံဖြစ်ကြောင်းသိကြသောအခါမှသာသင်တို့ရှိသမျှကိုသင်၏အမျိုးနှင့်စိတ်ကူးယဉ်သွားကြကုန်အံ့နှင့်အမှန်တကယ်သင့်ရဲ့လိင်စိတ်စူးစမ်းနိုင်ပါတယ်။ ယနေ့ညကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ပေါ်မှာရှိသမျှကိုသင်၏အလိုဆန္ဒများကိုစူးစမ်းလာကြ!